CryptoJournal စျေး - အွန်လိုင်း CJC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို CryptoJournal (CJC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ CryptoJournal (CJC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ CryptoJournal ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ CryptoJournal တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
CryptoJournal များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CryptoJournalCJC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000129CryptoJournalCJC သို့ ယူရိုEUR€0.000109CryptoJournalCJC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0001CryptoJournalCJC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000117CryptoJournalCJC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00116CryptoJournalCJC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.000812CryptoJournalCJC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00287CryptoJournalCJC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000481CryptoJournalCJC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000172CryptoJournalCJC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00018CryptoJournalCJC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00288CryptoJournalCJC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.000996CryptoJournalCJC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.000699CryptoJournalCJC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.00964CryptoJournalCJC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0217CryptoJournalCJC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000176CryptoJournalCJC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000195CryptoJournalCJC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00401CryptoJournalCJC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.000895CryptoJournalCJC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0136CryptoJournalCJC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.153CryptoJournalCJC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0497CryptoJournalCJC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.00947CryptoJournalCJC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00356
CryptoJournalCJC သို့ BitcoinBTC0.00000001 CryptoJournalCJC သို့ EthereumETH0.0000003 CryptoJournalCJC သို့ LitecoinLTC0.000002 CryptoJournalCJC သို့ DigitalCashDASH0.000001 CryptoJournalCJC သို့ MoneroXMR0.000001 CryptoJournalCJC သို့ NxtNXT0.00916 CryptoJournalCJC သို့ Ethereum ClassicETC0.00002 CryptoJournalCJC သို့ DogecoinDOGE0.0366 CryptoJournalCJC သို့ ZCashZEC0.000001 CryptoJournalCJC သို့ BitsharesBTS0.0049 CryptoJournalCJC သို့ DigiByteDGB0.00446 CryptoJournalCJC သို့ RippleXRP0.000439 CryptoJournalCJC သို့ BitcoinDarkBTCD0.000004 CryptoJournalCJC သို့ PeerCoinPPC0.000428 CryptoJournalCJC သို့ CraigsCoinCRAIG0.0578 CryptoJournalCJC သို့ BitstakeXBS0.0054 CryptoJournalCJC သို့ PayCoinXPY0.00221 CryptoJournalCJC သို့ ProsperCoinPRC0.0159 CryptoJournalCJC သို့ YbCoinYBC0.00000007 CryptoJournalCJC သို့ DarkKushDANK0.0406 CryptoJournalCJC သို့ GiveCoinGIVE0.274 CryptoJournalCJC သို့ KoboCoinKOBO0.0288 CryptoJournalCJC သို့ DarkTokenDT0.000118 CryptoJournalCJC သို့ CETUS CoinCETI0.366
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sat, 08 Aug 2020 23:20:03 +0000.